Maitiro ekugadzira iyo webhu saiti yeedu Kindle kuti iende nekukurumidza (uye wadii kuzviita) | MaReaders ese
Maitiro ekugadzira yedu Kindle yewebhu browser kuti iende nekukurumidza (uye wadii kuzviita)
Joaquin Garcia | | Amazon Kindle, Kindle tutorials
Tinofanira zvakare kutaura izvo zvenguva, izvi dzidziso inongoshanda chete neVa Kindle vanoverenga. Uye kana ichishanda pane mamwe mamodheru, ingave iine maReaders, kwete nemapiritsi. Kana iwe ukaedza kuzviita paMoto kana Kindle Moto, sezvo iri yechinyakare modhi, mhedzisiro inogona kuve ine njodzi.
3 Nzira yekuita sei iyo ereader browser kuti iite nekukurumidza?
4 3 Dzimwe nzira dzekunyengera uku dzakangonaka
5 Pfungwa dzako
Nzira yekuita sei iyo ereader browser kuti iite nekukurumidza?
3 Dzimwe nzira dzekunyengera uku dzakangonaka
Sezvineiwo kune dzimwe nzira dzekunyengera uku izvo zvinotibvumidza isu kuverenga edu ewebhu mapeji nenzira inokurumidza, yakachengeteka uye pasina kurasikirwa nekushanda.
Yokutanga yesarudzo idzi ndeye shandisa kuverenga gare gare sevhisi, pamwe ndiyo sarudzo yakanakisa nekuti kuwedzera pakuvandudza kuverenga paMhando yedu, tinogona kuishandisa kune chero muverengi, kushandura kuverenga pakati pemidziyo, kana kuitora chero nguva sezvatakaverenga pakutanga tisina kunetseka kunyangwe zvakabviswa here kana kushandurwa.
Kune Kindle vashandisi isu tine sarudzo ye SendtoKindle uye kune vashandisi vezvimwe zvishandiso isu tine sarudzo ye homwe. Ose ari maviri akanaka uye kwete chete titendere kuti tiverenge iwo mawebhusaiti mune edu ereader sekunge iwo aive ebook asi isu tinokwanisa zvakare kushandisa duramazwi, kusimbisa kana kushandura iro ruvara.
Imwe yechitatu ndiyo yechinyakare asi ingori inoshanda. Zvinenge zviri kurodha pasi nhau kana chikafu kubva pawebhusaiti kuburikidza Caliber uye kuti izvi zvitumire sebookbook kune vedu vanoverenga. Iri Caliber basa ndere akura kwazvo asi anoshanda chaizvo uye mutsauko chete zvine chekuita neakapfuura iwo ndizvozvo inotibvumidza isu kuve nekutonga kukuru kwekuverenga, kupfuura nemaitiro apfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » makambani » Amazon Kindle » Maitiro ekugadzira yedu Kindle yewebhu browser kuti iende nekukurumidza (uye wadii kuzviita)
KloudNote, anoverenga anoshamwaridzana nedhijitari kabhuku kemafashoni
Iyo Nubico ebook sevhisi inotengwa nekambani yeSweden Nextory